Mpisolovava Rosiana, mpifindra monina aostralianina, renim-pianakaviana any Moskoa
Home » Serivisy fampandrenesana tariby » Mpisolovava Rosiana, mpifindra monina aostralianina, renim-pianakaviana any Moskoa
Ny boky farany avy amin'ny mpanoratra rosiana dia mitantara ny zava-tsarotra sy fanamby amin'ny fivezivezena, fanombohana ary fitadiavana asa
EINPresswire.com/ - namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny mpanoratra anglisy Elena Bobkova, ny boky Russian Lawyer, Australian Immigrant: tolona ho an'ny maman'i Moskoa isan'andro ho amin'ny fiainana tsara kokoa. Ny boky dia mitantara ny fahasahiranan'i Bobkova sy ny olany tamin'ny naha mpisolovava azy tany Russia sy nifindra monina tany Aostralia. Ilay mpisolovava rosiana, mpifindra monina aostralianina dia manome tsipiriany momba ny iray taona sy tapany tamin'ny fiainan'i Bobkova rehefa vita ny fiainany tany Moskoa talohan'ny nidirany Down Under.
Avy tany amin'ny tanàna kely faritany Krasnoyarsk any Siberia, nifindra tany Moskoa i Bobkova taorian'ny nahazoany mari-pahaizana Masters of Law. Rehefa avy nanao mpisolovava tao an-drenivohitra rosiana nandritra ny taona maro i Bobkova dia nanapa-kevitra ny hifindra monina any Aostralia, izay nandaniany ny sivy taona nahafaly tamin'ny fiainany. Bobkova dia nanoratra boky telo momba ny fiainany tany Australiana tamin'ny fiteny rosiana teo aloha. Mpisolovava rosiana, mpifindra monina aostralianina no zavatra niainan'i Bobkova voalohany tamin'ny fanoratana boky amin'ny teny anglisy izay ahafahany manatona mpamaky betsaka kokoa noho ny teo aloha.
Bobkova dia nibanjina ny fotoanany tamin'ny naha-mpisolovava azy tany Russia ary nifindra tany Aostralia. Na dia feno hatsikana sy hatsikana aza, mpisolovava rosiana, mpifindra monina aostraliana koa dia feno ny tolona niainany tamin'ny fanombohana tany amin'ny firenena vaovao ary nitadiavana asa vaovao. Ny iray amin'ireo lohahevitra mandeha mandritra ny boky dia ny tsy fitovian'ny olona na firenena avy aiza na avy aiza.
Ny sanganasan'ny mpanoratra dia manazava ny antony mahatonga ny olona handao an'i Russia hitady fiainana vaovao any an-kafa. Izy io dia fijery vaovao sy manokatra ny fifindra-monina amin'ny firenena vaovao. Bobkova koa dia manokana fotoana hanazavana ny rafitra ara-dalàna Rosiana sy ireo lesoka maro samihafa. Mahafantatra fomba amam-panao sy fomba amam-panao Rosiana koa ny mpamaky. Bobkova dia mampiasa tantara mahatsikaiky momba ny fianakaviany manokana hanazavana ny hafahafa amin'ny fombam-pivavahana rosiana sasany.
Bobkova dia manana fomba fanoratra miavaka izay miaina eo amin'ny fiainana. Ny fiolahana izay ny tsipiriany Bobkova dia zava-poana. Rehefa avy nandany sivy taona nonina tany Aostralia i Bobkova dia nifindra monina indray ary monina any Etazonia miaraka amin'ny fianakaviany izao.
Mpisolovava rosiana, mpifindra monina aostralianina: ady an-drenin'i Moskoa isan'andro ho an'ny fiainana tsara kokoa dia azo alaina avy ao Amazon amin'ny roa tonta Volavola kindle sy paperback.
Mpanoratra: Elena Bobkova
Boky: Mpisolovava rosiana, mpifindra monina aostralianina: tolona ho an'ny reny isan'andro any Moskoa ho amin'ny fiainana tsara kokoa
Rohy Amazon: kitiho eto
Fifandraisana amin'ny Media
Mpisolovava Rosiana, mpifindra monina Aostraliana: Every mom mom any Moskoa
31 Janoary 2021, 09:12 GMT